राजनीतिमा न्याय अझै मरेको छैनः कास्की २ मा कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेल – हिमाल दैनिक
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार ०६:३०
Xanax Meds Online मंसिर १४ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा कास्कीको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेपाली कांग्रेसका १६ जना नयाँ/पुराना पस्ताका नेताहरुले पार्टीबाट टिकटको आशा गरेका थिए।
How To Purchase Alprazolam Online निर्वाचन हुने क्षेत्र एउटा तर, आकांक्षीहरुको भिड ठूलो थियो। त्यहि भिडमा ६ दशक लामो राजनीतिक संघर्ष गरेर पनि कहिल्यै टिकटको लागि मरिहत्ते पनि नगरेका र नेताको नजरमा पनि नपरेका नेता खेमराज पौडेल पनि मिसिएका थिए। उनले विगतमा आफूलाई पार्टीले अवसर नदिँदा पनि कहिल्यै गुनासो गरेनन् र जसले पाएपनि पार्टीको उम्मेदवारको पक्षमा जनतासँग भोट माग्दै हिँडे।
पछिल्लो समयमा नेपालको राजनीतिमा चुनावको शब्द उच्चारण हुनासाथ जो कोहीले बुझेको सामान्य परिभाषा भनेकोः जसको साथमा छ नोटको बिटो उसैले लगाउँछ नेतालाई भिटो। राजनीतिक नाता भन्दा दाताले नै नेतृत्वलाई सबै प्रकारले प्रभावित पारेर टिकट पनि लिन्छ र मत पनि किन्छ।
http://arkpaint.com/page/2/?s=rex तर, त्यो मान्यतालाई खण्डित गर्दै कांग्रेसले यसपटक कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा पुराना नेता खेमराज पौडेललाई मैदानमा उतार्ने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार मनोनयन दर्ता गर्ने अघिल्लो दिन बुधबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा भएको पदाधिकारी बैठकको निर्णय अनुसार पौडेल टिकट पाए।
http://stfrancisville.us/info/tourism-calendar/day.listevents/2018/11/12/43 पार्टीको त टिकट हात पारेलगत्तै बिहीबार हुने मनोनयन दर्ताका लागि गृहजिल्ला कास्की फर्कने क्रममा रहेका पौडेलले हिमाल दैनिकसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भने, ‘कांग्रेसमा बाहिर हल्ला गरिएजस्तो न्याय मरेको छैन। ६ दशकसम्म मैले पार्टी संगठनमा खेलेको भूमिकाको मूल्यांकन आज आएर भएको छ। अरु साथीहरुका हकमा पनि यो मूल्यांकन पद्धति लागू हुनु पर्छ।’ प्रस्तुत छः खेमराज पौडेलसँग टेलिफोनमा गरेको कुराकानीको अंशः
Buy Xanax Ebay Real Xanax Bars Online तपाईले कास्की २ को उपनिर्वाचनमा के आधारमा टिकट पाउनु भयो?
http://joshuaflorquin.com/fr/portfolio_category/housing-fr/ के आधारमा टिकट पाएँ भन्नुः मैले पार्टी संगठनमा गरेको लगानी र मेरो ६ दशक लामो इतिहासको मूल्यांकन गर्दै मप्रति पार्टी विश्वास गरेर दिएको हो। यसमा केन्द्रीय नेतृत्वले समग्र परिस्थितिको मूल्यांकन गरेर जिल्लाका साथीहरुको राय, सल्लाह र सुझावका आधारमा मलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय लियो।
तपाई बाहेक अरु १५ जना जिल्ला र क्षेत्रीयस्तरिय नेताहरु पनि टिकटका आकांक्षी थिए। उनीहरुमध्ये तपाईले नै पाउँनु भयो। यसका के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ?
हो, म बाहेक पार्टीभित्र यसअघि पराजित पत्यासी प्रखरवक्ता देवराज चालिसे, सोभियतबहादुर अधिकारी, विरेन्द्र विजुक्छे लगायत १५ जना आकांक्षीहरु सबै उत्तिकै योग्य साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। यसमा म मात्रै योग्य अरु सबै अयोग्य भन्ने कदाचित होइन। तर, पार्टीको उम्मेदवार एक जनामात्रै हुनु पर्ने अवस्थामा कसै न कसैलाई दिनु पर्दथ्यो। विगतमा अरु साथीहरुले पाउनु भएको थियो, यस पटक पार्टीले मलाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्यो।
Cheapest Xanax Online कांग्रेसभित्र आफूले नपाएपछि अरुलाई पनि सफल हुन नदिने घात, प्रतिघात र अन्र्तघातको गम्भीर रोग अथवा संस्कार छ। नपाउने साथीहरुलाई कसरी मिलाउनु हुन्छ?
यसपटक कास्की २ मा हुने निर्वाचनमा कास्कीका साथीहरुबीच टिकट नपाउँदासम्म एक आपसमा प्रतिस्पर्धा पनि भयो होला। तर, अबको प्रतिस्पर्धा हामी कांग्रेसका साथीहरुबीचको होइन। यो विसम परिस्थितिमा हामीले विरोधी शक्तिसँग लड्नु परेको छ। त्यसका लागि हामीबीच उच्च राजनीतिक संस्कारकासाथ बलियो एकताको खाँचो छ। यो कुरा म मात्र होइन सबै साथीहरुले बुझ्नु भएको छ। त्यसको उदाहरणका रुपमा तपाईले टिकटको बलियो आकांक्षीका रुपमा रहनु भएका देवराज चालिसेको प्रतिक्रियाबाट पनि थाहा पाउन सक्नु हुन्छ। जब मेरो नाममा नेतृत्वले टिकट दिने निर्णय गर्यो त्यसपछि मलाई अग्रिम बधाई र शुभकामना दिने सबै भन्दा पहिलो व्यक्ति चालिसेजी नै हुनु भयो। अरु साथीहरु पनि अहिले मसँगै भोलिको मनोननय दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुन जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी बीचमा बलियो एकता रहेको छ।
http://vashikaranspecialist.com/tag/black-magic-specialist/ चुनावमा तपाईका चुनावी मुद्दा के हुनेछन्?
अघिल्लो चुनावमा जनताले विश्वास गरेर नेकपालाई मत दिएका थिए। त्यहि मतको आधारमा सरकार बनेपछि जनताले राज्यबाट जुन सेवा, सुविधा, सुशासन र संमृद्धिको आशा र भरोसा गरेका थिए त्यो वर्तमान सरकारको अकर्मण्यता र ज्यादतीले भंग भएको छ। भलै यो निर्वाचनको परिणामले सरकारको अंकगणितमा फेरबदल हुँदैन। तर, सरकारको अकर्मण्यता, ज्यादती र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपूर्ण गतिविधिविरुद्ध यो उपनिर्वाचन मिनि जनमत संग्रह जस्तै हुनेछ। जहाँ जनताले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएर सरकारलाई उसले लिएको गलत मति र गति दुबै सुधार्दै देश र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सशक्त सन्देश दिनेछन्।
तपाई उमेरले ७४ वर्ष पुग्नु भयो। पैसा पनि तपाईसँग छैन। यो उमेर र अवस्थामा पार्टीको टिकट लिएर के गर्न सक्नु होला र?
म ०१७ सालदेखि नै कांग्रेसको राजनीतिमा लागेको व्यक्ति हुँ। म बी.पी. कोइरालाको चेलो हुँ। उहाँ भन्नु हुन्थ्यो, मानिस उमेरले होइन, विचारले युवा अथवा बुढो हुन्छ। राजनीति पैसाले गरिँदैन, विचार र उच्च नैतिकताको बलमा गरिन्छ। त्यसैले ७४ वर्षको हुँदैमा म उमेरसँगै शारिरीक रुपमा अशक्त भएर हिड्नै नसक्ने अवस्थामा छैन। ममा अझै पनि एउटा युवामा हुनसक्ने जोस, जाँगर र उर्जामा कुनै कमि आएको छैन। मैले आजसम्म कास्की कांग्रेसको राजनीतिमा लागेर कुनै पनि कुरामा आफूलाई राजनीतिक, नैतिक र व्यवहारिक हिसाबले चुकेको छैन। मसँग भएको त्यहि नैतिक बल र राजनीतिक चरित्रका आधारमा बलियो आत्मविश्वास लिएर म कास्कीका जनतामाझ जाँदैछु। पार्टीले मप्रति गरेको विश्वासलाई राजनीतिक र नैतिक आधारमा डगमगाउन दिन्न। यो म एक्लैको मात्र होइन, सिंगो कांस्की कांग्रेसको प्रण हो।
Prevपछिल्लोबल्ल टुंगियो कांग्रेसका उम्मेदवारहरुको नाम
अघिल्लोपोखराको राष्ट्र बैंक नजिकै विष्फोट, स्थिति सामान्यNext